Flash – Page 37 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश नं. १ को आयोजनामा सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा सिमा अतिक्रमण, राष्ट्रिय स्वाधिनता र पहिचान सहीतको संघीयताको पक्षमा राष्ट्रिय अभियानको शीलशीलामा एक विरोध सभाको आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रा.डा. ओम गुरूङले पहिचान सह्ीतको संघीयताका लागि आदिवासी जनजातिका ठुलठुला आन्दोलनहरु गरेका थिए । राज्यसंग सम्झौता पनि भएको छ […]
Posted in: २०७४–चुनाव, Bichar, Flash, National News, News
फागुन एक अर्थात् जनयुद्ध दिवस
“प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ” उपर्युल्लिखित नारा थियो जनयुद्ध थालनी गर्दाको । नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्दै समाजवाद, साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य र उद्धेश्य थियो जनयुद्धको । तात्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले पुरानो राज्यसत्ता ढाल्न पहिलो पटक बन्दुक उठाएका थिए । यतिखेर जनयुद्धका २४ वर्ष पूरा भएर […]
क्रान्तिकारी धातु तथा हस्तकला मजदुर संघकाे भेला सम्पन्न, दिनेश थापाकाे नेतृत्वमा ११ सदस्यीय कमिटि गठन
ललितपुर । अखिल नेपाल क्रान्तिकारी धातु तथा हस्तकला मजदुर संघको प्रथम भेला ललितपुरको ग्वार्को स्थित स्टार फुडल्याण्डमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले दिनेश थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितीको गठन समेत गरेको छ । भेलामा नेपाली मजदुरहरुको गौरवशाली सङ्गठन अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष एवं प्रमुख अतिथी ईश्वर तिमिल्सिना, […]
हिज फागुन दुई गते भ्यालेन्टाइने दिनबाट नेपाल मण्डलको उखाने सरखारले दुई बर्से बुटो नाघेर तीन बर्समा पाइला टेकेको छ । त्यसैले यतिबेला सरखारले गरेका दुई बर्सका खती उपतीका बारेमा सडकदेखि सदनसम्म, चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म र सिँगान पुछ्ने स्कुलदेखि चुल्ठेमुन्द्रे कलेजसम्म जताततै चर्चा परिचर्चा चलेकै छ । सरखारी पाटीका भक्तजनहर्ले सरखारका उपतीको पोको पन्तुरो खोलेर […]
काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ काठमाडौं जिल्लाको दोस्रो जिल्ला भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले पत्रकार सागर श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष इन्द्र राउतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलाले निर्वाचित गरेको १५ सदस्यीय कमिटिको उपाध्यक्षमा जयनारायण दाहाल, सचिवमा प्रदिपकुमार श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा गोपालदास श्रेष्ठलाई निर्वाचित गरेको छ । भेलाले सदस्यहरुमा सुमन […]
काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र संगठन विस्तार अभियान’ २ नं. प्रदेशमा जारी रहेको छ । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वी व्यूरो इन्चार्ज हरिभक्त कँडेलको नेतृत्वमा रहेको यो अभियान टोलीले सोमबार सप्तरीका ५ स्थानमा कोणसभा सम्पन्न गरेको छ । सो अभियान टोलीले फत्तेपुर, कञ्चनपुर, महुली, कठौना र कल्याणपुरमा कोणसभा सम्पन्न गरेको हो […]